Calaamadda Shiinaha Calaamadda Muddo Dheer ee Dhaldhalaalka Liinta Eyeshadow 14 Midab Wershad soosaarayaasha dareeraha dareeraha ah ee aadka u midabaysan Soosaarayaasha leh iyo soo saarayaasha | Jinfuya
Shaashadda indhaha ee dareeraha ahi waa mid saamayn sare leh, oo hadh dareere dhalaalaysa oo aad u sareysa taas oo ku siinaysa midab ballaadhan oo mug leh iyo saamayn dhinacyo badan leh.
Ka dabiici badan budada hooska isha, si dabiici ah ula xiriir maqaarka, saameynta qurxinta indhaha ee bilaa cillada ah. Ku hel indho indheysan oo indha indheyn leh oo leh muraayad indho-indheyn ah oo hal-mariye leh indhashareerkan dareeraha ah ee dheecaanka leh, oo loo qaabeeyey dhar raaxo leh, hoos u dhac yar iyo saameyn sare; oo isticmaal faraha ama buraashka indhaha indhaha oo iskiis u dalbo si qarsoodi ah, muuqaal jilicsan, ama ku dhaji dusha sare ee indha-shareerka wax aad u riwaayado ah.
Si aad u dalbato, ku shubo qalabka tubbada ka dibna dabool daboolka. Isku qas midab dhalaalaya oo daran. Waa qaaciido aan dheg dheganeyn, miisaan fudud, oo raaxo leh oo dhaqso u qalajiso si looga caawiyo yareynta dhicitaanka.
Soo ogow sababta aan u jecel nahay indha-sarcaadka dareeraha ah:
1.Liquid indhaha ayaa ka dabiici badan budada hooska isha, si dabiici ah ula xiriirta maqaarka, saameynta qurxinta indhaha ee bilaa cilmiga ah.
2.Shimmer eye eye waxay kaloo leedahay saameyn wax ka beddelid ah. Hooska indhaha oo shummer ah ayaa ka dhigi doona saameynta qurxinta oo dhan si weyn loo hagaajiyay.
Qaybaha dhalaalaya ee indhaha waxay kordhiyaan buuxinta, taasoo ka dhigaysa indhuhu inay u ekaadaan saddex-cabbir badan. Haddii loo isticmaalo fiidkii, waxay indhaha ka dhigeysaa mid iftiimaya gudcurka waxayna noqoneysaa diiradda dhalaalaya.
4. Faa'iidooyinka: Shimbir dhinacyo badan leh, Midab qafiif ah oo Super-saturated ah, Waxaa lagu heli karaa 6shades, Si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sameys ah
Dhismo si dabiici ah u taabasho maqaarka, waxyeellada indhaha qurxinta indhaha,Dhaldhalaalka dareeraha ah ee dareeraha ah, Muddo Dheer, Shimmer Iyo Iftiin Eye Hadh, Iftiiminta Degdega Ah, Qalabaynta Qurxinta Indhaha Qurxiyo
Ku habboon ka dabiici badan budada hooska isha
Macluumaadka saafiga ah 0.10 fl oz. (6 ml)
Shaqaynta Caanaha dareeraha ee ku habboon dhammaan noocyada maqaarka
Waan Balan Qaaday Arxan la’aan, vegan iyo 100% ka madax banaan Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, iyo Hydroquinone.
Hore: Shahaadada Labbarka Gaarka ah ee loo yaqaan 'Eyeshadow' midab midabkeedu yahay midab aan biyuhu biyuhu ka madhnayn oo ah midabka 'Pearlescent Sequined Glitter Eyeshadow Palette'
Xiga: Shimmer Liquid Eyeshadow Vegan Makeup Indhaha Indhaha Cosmetics 18 midabo Label Gaarka ah Shaning Liquid Glitter Eye hooska
Muraayadaha indhaha ee dareeraha ah
Dhaldhalaalka dareeraha ah ee dareeraha ah
Dareeraha Matte Liquid
Shimmer Liquid Eyeshadow indhaha Qurxinta Indhaha Cosm ...
Qurxinta Label Gaarka ah ee loo yaqaan 'Eyeshadow' midabka 35 ...